Deco Ribbon Craft Ribbon Curler Shredder: Rehetra momba ny ribbon shredders
Teo aloha	Manaraka
Inona no atao hoe Ribbon Shredder?
Ribbon shredder dia fitaovana fanapotehana sy fikorotanana izay mitazona rafitra tsotra vita amin'ny plastika. Izy io dia misy andalana metaly na plastika nify izay napetraka ao amin'ny valanorano ambony mba handrovitra ny kofehy araka ny fepetra takianao.. Ny valanorano ambany dia miendrika lavaka ary heverina fa hanaiky ny fihazonana sprint. ny ribbon shredder manana anarana samihafa amin'ny tsena samihafa. Ity dia azo antsoina koa hoe mpanapaka ribbon, fitaovana famakivakiana kofehy, ribbon mini slitting milina, ribbon stripper, ribbon curler, curler, ribbon mini slitting fitaovana, fitaovana shredder ribbon na ny kofehy slitter.
Karazana Ribbon Shredders misy eny an-tsena
Betsaka ny karazany nampiana tamin'ity fitaovana mahafinaritra ity. Vokatr'izany, tonga eny an-tsena amin'ny endrika samihafa. Misy ribbon shredders amin'ny metaly nify amin'ny valanorano ambony ary koa ribbon splitters miaraka amin'ny nify plastika. Tsara homarihina koa fa ity fanangonana ny Ribbon shredders miitatra hatramin'ny lafiny roa ribbon shredder miaraka amin'ny fitaovana curling, kofehy slitter, ribbon shredder curler KOA, ribbon shredder mpanapaka taratasy sy ny maro hafa.
Bebe kokoa momba ny ribbon shredders
Ity fitaovana noforonin'olombelona ity dia natao hanamora ny fiainana. Indrindra fa rehefa miatrika curls ribbon mikorontana ianao. Raha manapa-kevitra ny hanapaka na hiondrika ny kofehy amin`ny fampiasana hety, mila ora maro vao vita ny fianarana. Lasa mora kokoa ny zavatra tamin'ity mahagaga ity ribbon shredder izay tsy maintsy misintona tsotra izao ny habetsaky ny kofehy amin'ny alalan'ny fitaovana. Mahagaga fotsiny ny vokany. Ity fitaovana ity dia azo ampiasaina amin'ny tanjona samihafa toy ny famenoana fanomezana sy ny haingo amin'ny fety amin'ny fampiasana ny ribbon rovitra.
Ity fitaovana mora ampiasaina nefa mety ity dia manampy anao hanasaraka sy manodina ny tady amin'ny fisintonana tsotra fotsiny. Tsy mila mitsidika mpamono fanomezana matihanina amin'ny haingo fety ianao mba hamitana ny asa ribbon. Ity fitaovana ity dia mampiroborobo ny famenoana fanomezana DIY sy haingo ribbon ho an'ny olona.
Misy amin'ny loko sy fomba isan-karazany
Ity fitaovana tsotra ity dia tonga amin'ny loko sy endrika isan-karazany eny an-tsena. Ny pallet design dia misy lafiny tokana, lafiny roa, metaly na plastika nify. Marihina fa ny iray amin'ireo fomba ireo dia azo alaina amin'ny farafaharatsiny 4 fampifangaroana loko amin'ny endrika tsirairay. Ataovy matanjaka sy mahasarika kokoa ny lalao ribonao miaraka amin'ity fitaovana mahagaga ity.
Marihina koa fa 2 ireo modely vaovao dia antenaina ho tonga eny an-tsena tsy ho ela. Ireo modely mandroso ireo dia mbola ao anatin'ny dingana fampandrosoana ary antenaina fa hanana safidy vaovao mahafinaritra izay mety tena ilaina
Ny endri-javatra mahatalanjona sy ny tombontsoa azo avy amin'ity fitaovana tsotra ity
Ity fitaovana ity dia manampy anao hamorona fanomezana tsy manam-paharoa sy famoronana indrindra. Ity fitaovana ity dia tsy mandany toerana be ary maivana kokoa noho ny andrasanao ny lanjany. Azonao atao ny manindrona fotsiny ity fitaovana ity ao anaty paosy na poketrao mba hitondra azy na aiza na aiza alehanao. Ny andian-nify mahagaga eo amin'ny valanorano ambony dia manampy anao hisintona ny kofehy tsy misy olana. Ity fitaovana ity dia azo ampiasaina mandritra ny vanim-potoanan'ny Krismasy. Azonao atao ny mampiasa azy io mba handravaka ny fanomezana Krismasy amin'ny fampiasana ny bounce sy curling ribbon effect. Azonao atao ihany koa ny mamorona shreds manintona eo amin'ny fonosana fanomezana. Ity fitaovana tsotra ity dia manana tanjona am-polony. Marihina fa azonao atao ny manasaraka ny ribbon amin'ny tadin'ny balaonina amin'ny fampiasana an'io fitaovana io ary ampiasaina amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana manokana na lanonana fampakaram-bady.. Mifanome tanana amin'ny lehiben'ny tsena mba hitsapana ny hatsaran'ny asa vita amin'ny kofehy mahavariana.
RSPAC- Ny mpitarika ao amin'ny Ribbon Shredders
RSPAC no mpitarika ny tsena amin'ny famokarana sy fivarotana kalitao avo lenta Ribbon Shredders. Tian'ny mpanjifa io marika io noho ny hafa noho ny fahombiazan'ny vokatra vokariny. Tsy afaka mieritreritra ny hampifanaraka ny endrika azonao amin'ny fanomezanao ianao amin'ny fampiasana an'ireo majika ireo ribbon shredders. Izy ireo no mpitarika ny tsena amin'ity sokajy vokatra ity 94% anjara amin’ny tsena. Ity no vokatra tsara indrindra anananao ao an-trano. Mivadika tsikelikely amin’ireo ny taranaka zokiny ribbon shredders avy amin'ny fomba nentim-paharazana izay narahiny am-polony taona maro.
Haingo avo lenta amin'ny vidiny ambany indrindra
Lasa ny andro tsy maintsy nandanianao vola be tamin'ny haingo fanomezana sy ny sangan'asa misy fehy hafa. ny ribbon shredder curlers tonga eo ambanin'ny anarana marika RSPAC, manamora ny fiainana ho an'ireo mpampiasa ribbon any ivelany. Ny ribbon curls dia manome endrika vaovao sy tsy manam-paharoa amin'ny fisarahana sy ny tady amin'ny ribbon. Azonao atao ny manangona ny fanomezanao amin'ny vidiny tsotra. Ny kalitaon'ny fitaovana dia niantoka ny RSPAC. Ampio glamour sy loko ny hetsikao amin'ny fampiasana ny ribbon shredder novokarina sy amidin'ny RSPAC.
Tian'ny rehetra ny mahazo vaovao momba ny fironana farany amin'ny famonosana fanomezana sy ny haingo fitsingerenan'ny andro nahaterahana hafa. Izany dia tena mifandray amin'ny haingo balaonina ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana manokana. Tsy maintsy mamindra ny sainy amin'ity vokatra ity fotsiny izy ireo mba hanao ny tsy azo atao. Azonao atao ny manao bounce sy curls amin'ny alàlan'ny ribbon araka ny voafaritrao ao anatin'ny segondra vitsy. Ireo fitaovana ireo dia azo ampiasaina irery amin'ny fanaovana voninkazo harona taratasy sy aforitra amin'ny alalan'ny ribbon.
Ny RSPAC dia manolotra anao safidy maro ary ny tsirairay amin'ireo safidy ireo dia hanome anao vokatra miavaka sy tsy manam-paharoa. Ny mpanjifa dia afaka miantehitra foana amin'ny fitaovana izay amidy eo ambanin'ny marika RSPAC. Izy ireo dia mpamorona fironana ho an'ireo izay te-hifindra amin'ny fironana farany. Miantehitra mafy amin'ny fivarotana "teny am-bava" izy ireo izay hanoroan'ny mpanjifa ny vokatra ho an'ny mpividy roa na telo farafahakeliny.. Izany no karazana laza azony nandritra ny taona maro.
Mety hivadika ho sangan'asa mahagaga ao anatin'ny segondra vitsy ny asan'ny ribbon-nao. Ny hany takiana dia a ribbon shredder ary tanana mamorona roa hanao ny majika. Ampio loko sy haingon-trano amin'ny fiainana amin'ny fampiasana an'io mahagaga io Ribbon Shredder novokarina sy amidin'ny RSPAC.
ny Charles Wong|18 Jolay, 2017|Uncategorized|Comments Off on Deco Ribbon Craft Ribbon Curler Shredder
Momba ny Mpanoratra: Charles Wong